ပရဟိတ (သို့ မဟုတ် ) အလှူ လုပ်ချင်သူများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ပရဟိတ (သို့ မဟုတ် ) အလှူ လုပ်ချင်သူများအတွက်
ပရဟိတ (သို့ မဟုတ် ) အလှူ လုပ်ချင်သူများအတွက်
Posted by မောင် ပေ on Dec 30, 2011 in Buddhism, Creative Writing, Local Guides | 15 comments
one day တုန်းကပေါ့ ။
အသိတစ်ယောက် နဲ့ စကားပြောကြရင်း ၊ အလှူလုပ်တဲ့ ကိစ္စ အကြောင်း ပြောဖြစ်သွားတယ် ။
ကျွန်တော် က ငွေ/ပိုက်ဆံ အလှူလုပ်ချင်နေတဲ့ အချိန် ၊ ဘယ်မှာ ဘယ်လို သွားလှူရမလဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် မသိဘူး ဖြစ်နေတယ် ။ ယခင်လှူခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေရှိပေမယ့် ၊ အခြားနေရာတွေမှာလည်း လှူချင်တာကိုးဗျ ။
ကျွန်တော် က စာတွေဖတ်ရင်း ၊ ကောက်ချက်ချ မိတဲ့ အယူဝါဒ တစ်ခု က ၊ “ လူ ဖြစ်လာတာ ဘာတာဝန်ရှိလဲ ၊ တွေးကြည့်တော့ မနည်းမနော ပါဘဲ ၊ အဲဒီ တာဝန်တွေ ထဲ မှာ ကိုယ် တတ်နိုင်တာ ဘာရှိလဲ ဆက်တွေးတော့ ၊ ပရဟိတ လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဖွဲ့ အစည်းတွေ ကို ကိုယ် တတ်နိုင်သလောက် သွားလှူ သွားထောက်ပံ့ ပေးရင် ကျွန်တော့် အတွက် အိုကေတယ် ။ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ အမိနိုင်ငံတော် ထဲ က လိုအပ်ချက်များအတွက် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်အားခကနေ ရလာတဲ့ ငွေအလှူဟာ အထောက်အပံ့ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေချင်တယ် ။ အကျိုးနဲနဲဘဲ ရှိရှိ ၊ အများကြီး ရှိရှိ ၊ ကိုယ့် အလှူဟာ အကျိုးဖြစ်စေတယ် ဆိုရင် ကျေနပ်တယ် ။ ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်တယ် ။ ”
ဆိုတော့က… ကျွန်တော် လုပ်အားခ ချွေးနည်းစာလေးတွေ စုပြီး လှူတော့မယ် ဆိုရင် ၊ နေရာ လိုက်ရှာရတယ် ။
တစ်ခါ က မန်းတလေး ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ကင်ဆာရောဂါကု ဌာန ကို ရောက်ခဲ့ဖူးတယ် ။
အဲဒီမှာ က တက်ရောက်ကုသခံနေတဲ့ ကင်ဆာရောဂါသည် တွေ ကို နေ့ တိုင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စားချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် ချက်ကျွေးတယ် ။ ကင်ဆာရောဂါသည် တွေ ဆိုတာက ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် ခံတွင်းပျက်တာကိုး ။
ဒါနဲ့ အဲ့တုန်းက ၊ တစ်ရက်စာ စားစရိတ် သွားလှူမယ် ဆိုပြီး ရောက်သွားတော့ ၊ အလှူလက်ခံ မယ့် လူက အစည်းအဝေးတက်နေတယ် တဲ့ ။ အစည်းအဝေး က လည်း ကြာဦးမှာ ဆိုတော့ ၊ ကိုယ်လည်း စိတ်မရှည် မစောင့်နိုင်တာ နဲ့ ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ ကျောင်းမှာဘဲ သွားလှူလိုက်တော့တယ် ။
ကျွန်တော် ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ တတ်နိုင်လို့ ၊ စိတ်ဝင်စားလို့၊ အခုလှူမယ် ဆိုရင် ချက်ချင်းလှူလိုက်ရမှ ကျေနပ်တဲ့ ကောင်ဆိုတော့ဗျာ ။
အဲ..အခု ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ နဲ့ စကားပြောဖြစ်ကြတော့ ၊ တောင်တန်းသာသနာပြု အဖွဲ့ ကို ပိုက်ဆံ ၊ အဝတ်အထည်ဟောင်း ၊ ဖိနပ်ဟောင်း ၊ ကျောင်းဝတ်စုံ ၊ ဆန်၊ ဆီ ၊ ဆား ၊ ဆေး ၊ပဲ စသဖြင့် အကုန်လှူလို့ ရတယ် ဆိုတာ သိလာရတယ် ။ ဖုန်းနံပါတ် ရလာခဲ့တယ် ။ ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းချိတ်လိုက်တယ် ။
“ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ကို ကျွန်တော်တို့ လင်မယား လာလှူပါ့မယ် ပေါ့ ၊ အိုခေ တဲ့ ”
ဒါနဲ့ ၊ အလှူလုပ်တဲ့ နေ့ ရက် ၊ ရောက်သွားတဲ့အခါကြမှ ၊ ကိုယ်လှူမယ့်နေရာ က မန်းတလေးမြို့ မှာ ဗြဟ္မစိုရ်နာရေးကူညီမှု အသင်း ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ “ဆရာတော် ဦးတိက္ခ ” ကျောင်းဖြစ်နေတာ သိရတယ် ။ ဝမ်းသာမိသွားတာပေါ့ဗျာ ။
တောင်စလင်းတိုက်သစ်မှာဗျ ။ အရင်က မရောက်ဖူးဘူးဗျ ။
အဲဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ပြန့် ပွားရေး အသင်း ရုံးခန်းရှိတယ် ။ အလှူရှင်များ ရဲ့ အလှူငွေ များ ၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ၊ ဘုရားဆင်းတုများ စသည်ဖြင့် အလှူလက်ခံတဲ့ နေရာပါဘဲ ။ ဗြဟ္မစိုရ် အသင်းတိုက် တည်နေရာ က တောင်ဘက် ကပ်ရပ်မှာ ။ အဲဒီမှာ ဒုတိယဥက္ကဌ နဲ့ တွေ့ ဆုံရပြီး ၊ ဆရာတော် က နယ်စပ်တွေ မှာ ၊ ချင်းတောင်ဒေသတွေမှာ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ခြေဖျားက ဒေသတွေမှာ သာသနာ ပြု လုပ်ငန်းတွေ ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သိရတယ် ။
ချင်းတောင်ပေါ်က လူတွေ ဟာ တဲ့ ၊ ပညာမတတ် ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာနဲ့ တဲ့ ။ ပညာမတတ် ဆို ရာသီဥတုဆိုးဆိုးဝါးဝါးထဲမှာ နေရပြီး ၊ ပင်ပန်းကြီးစွာ ဝမ်းစာရှာဖွေနေရတာ ဆိုတော့ ပညာသင်ဖို့ ဝေးပြီပေါ့ ဗျာ ။
တစ်ချို့ ရွာတွေမှာ ဆိုရင်ဟင်းချက်ရင် သုံးရတဲ့ “ ဆား ” ဆိုတာကို လုံးဝ မတတ်နိုင်ကြရှာဘူးတဲ့ ။ ဆားတစ်ပိဿာ ၄၀၀၀ ကျပ်တဲ့ဗျာ ။ သူတို့ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းကြီးစွာ လုပ်ကိုင်ရှာဖွေမှ ငွေတစ်ထောင်ကျပ် လောက် ဘဲ ရတာဆိုတော့ ၊ ဘယ် ဝယ်စားနိုင်ကြမလဲ ဗျာ ။
နောက်ပြီး တစ်နှစ် ကို တစ်ခါလောက် ၊ အဲဒီဘက်တွေ က စိုက်ခင်းတွေ မှာ ကြွက်အုပ်တွေ က ဝင်သောင်းကျန်းကြသေးတယ်တဲ့ဗျ ။ စိုက်ထားသမျှ ဆန် တို့ ပြောင်းတို့ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ ၊ အကုန် ဖျက်စီး သွားတယ် တဲ့ဗျာ ။ ဆိုတော့က ၊ အငတ်ဘေး ဆိုက်ပြီပေါ့ ။ အဲ့ခါကြရင် တောင်တန်းဒေသတွေမှာ သာသနာပြုဖို့ ရောက်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများဆီမှာ လာပြီး အကူအညီတောင်းခံကြပါသတဲ့ ။
အဲဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ပြန့် ပွားရေး အတွက် ရောက်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးများ က ဘာလုပ်နေကြလဲ ဆိုရင် ၊ ရာသီဥတု ဆိုးတာ ကို အံတု ရင်း ၊ ဘာသာစကား အခက်အခဲ ကို ရင်ဆိုင်ရင်း ၊ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှု ကို အံတုရင်း ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ကို ရင်ဆိုင်ရင်း အဲဒီက ဒေသခံလူတွေ ရဲ့ အခက်အခဲတွေ ကို ဖြေရှင်းပေးနေပါတယ် ။
ဒေသခံတွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေ ကို ပညာသင်ပေးတယ်ဗျာ ။ မွေးဖို့ ခက်ခဲလို့ မမွေးနိုင်လို့ ကျောင်းလာပို့ တဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေ လဲ ရှိတယ်ဗျ ။ သူတို့ လေးတွေ ကို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက် ပညာသင်ပေးနေတယ် ဗျ ။ စောင် ၊ အဝတ်အစား ၊ ဖိနပ် ၊ ကျောင်းစာအုပ် အစုံပေါ့ဗျာ ။ ကျန်းမာရေး လည်း စောင့်ရှောက်ပေးတာ ပေါ့ဗျာ ။
ဒေသခံ လူတွေ ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အကူအညီတောင်းမှုများကို လည်း ဆန် တို့ ဆီ တို့ ပဲတို့ စသဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဗျာ ။
နောက်ပြီး အနောက်တိုင်းဆေး ၊ တိုင်းရင်းဆေး အစရှိသဖြင့် ဆေးဝါးတွေ လည်း လှူဒါန်း ကူညီပေးနေတာ ဗျ ။
သူတို့ စိတ်ပါပြီ ဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်း သရဏံဂုံ တင်ပေးတာပေါ့ ဗျာ ။
( အသုံးအနှုန်း မှားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် လေးစားစွာတောင်းပန်အပ်ပါသည် )
ဒေသခံတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် လည်း ၊ ရဟန်းခံချင်တဲ့ သူ ကိုရင်ဝတ်ချင်တဲ့ သူ များ ကို စုပြီး ရှင်ပြုရဟန်းခံပေးတယ်ဗျာ ။ အိမ်မှာကိုးကွယ်ဖို့ ဘုရားဆင်းတု တွေ လှူပေးတယ်ဗျာ ။ တစ်ကယ်ကို ကောင်းမွန် တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ ။
အသင်းကြီးဟာ အလှူရှင်များ လှူဒါန်းကြတဲ့ လှူဒါန်းပစ္စည်းများ ကို အဲဒီ ဘုန်းကြီးတွေ ဆီ ရောက်အောင် လမ်းစရိတ်ခံပြီး ပို့ ပေးနေပါတယ် ။
လမ်းစရိတ်ဆိုလို့ ၊ ကားခ က လည်း မသေးဘူးဗျ ။ ချင်းတောင်ဘက် ကို ၁၀ဘီးကား တစ်စီးစာ ပို့ မယ် ဆိုရင် ကားခက ရှစ်သိန်းကျပ် ခန့် ကုန်ကြတယ်ဗျ ။
ကျွန်တော်တို့ လင်မယား စိတ်ထဲမှာ စေတနာ သဒ္ဒါတရားတွေ ဖြစ်မိပြီး ၊ “ နယ်စပ်တောင်တန်းနဲ့ ကမ်းရိုးတန်း ဗုဒ္ဓဘာသာနာပြန့် ပွားရေး အတွက် တစ်သိန်းကျပ် လှူဒါန်းခဲ့တယ် ဗျာ ”
နောက်တစ်ခု သိလာရတာက သမိုင်းမှာ ရေကန်ပေါင်း ၈၄၀၀၀ ၊ ကျောင်းပေါင်း ၈၄၀၀၀ ၊ စေတီဘုရား ၈၄၀၀၀ လှူခဲ့တဲ့ အသောက မင်းကြီး ဟာ သူ လှူခဲ့တဲ့ အလှူတွေ အတွက် သာသနာအမွေဆက်ခံတဲ့ သူ ဖြစ်ပြီလား လို့ ၊ မထေရ်မြတ် ကို မေးတော့ ၊ မိမိရင်မှ ဖြစ်သော သားကို ဖြစ်စေ ၊ သူတစ်ပါးရင်မှ ဖြစ်သော သား ကို ဖြစ်စေ ရှင်ပြု ရဟန်းခံ မှသာ သာသနာ့အမွေ ဆက်ခံကြောင်း ဖြေကြားလို့ ၊ ဝမ်းသာအားရ နဲ့ သူ့ သားတော် နဲ့ အခြားသူများကို ရဟန်းခံ အလှူကြီးလုပ်တယ်တဲ့ဗျ ။
အခု ဒီ နယ်စပ်တောင်တန်း နဲ့ ကမ်းရိုးတန်း ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ပြန့် ပွားရေး အသင်းကြီးကလည်း လာမယ့် ၂၀၁၂ ထဲမှာ ရှင်ပြုရဟန်းခံ အလှူတော်မင်္ဂလာများ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိနေတာ ကို သိခဲ့ရပြီး လှူဒါန်းလို့ ရတာကို လည်း သိရလို့ ၊ ရဟန်းနှစ်ပါးစာ အတွက် နှစ်သောင်းကျပ် လှူခဲ့သေးတယ်ဗျာ ။
နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေ ကိုးကွယ်ဖို့ ဘုရားဆင်းတု လှူလို့ ရတယ် ၊ ဆင်းတုတော် ရဲ့ ပုလ္လင်မှာ အလှူရှင် နာမည်ထိုးပေးတယ် တဲ့ဗျ ။ အဲဒါအတွက်လည်း ဆင်းတုတစ်ဆူ မှ ကိုးထောင်ကျပ် ဘဲ ကျသင့်တယ် ။
အဲဒါပြီးတော့ စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့ စွာနဲ့ ပြန်ခဲ့ကြပါတယ် ။ လက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေ လည်း ယူခဲ့တယ် ။ အသိမိတ်ဆွေတွေ ကို ပြန်ဝေပေးဖို့။
အခု ကျွန်တော် ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ ၊ ဂေဇက်လာ ဂေဇက်ဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များကို အဓိက ရည်စူးပြီး ရေးတာပေါ့ ဗျာ ။ လှူချင်သူ များ အတွက် ဒီလိုနေရာမှာ ဒီလိုတွေလှူလို့ ရပါလား ဆိုတာလေး ကို သိစေချင်လို့ ပါ ခင်ဗျာ ။
အခြားဘာသာဝင်များအနေနဲ့ လည်း လှူချင် လှူလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ ။
လိပ်စာကတော့ အပေါ်က ပုံထဲမှာ ပါပါတယ် ခင်ဗျ ။
ဒီလောက်နဲ့ ဘဲ ရပ်နားခွင့် ပြုပါခင်ဗျာ ။
အခုရေးတင်တဲ့ ပို့ စ်မှာ အမှားအယွင်း တွေ့ ရှိခဲ့ပါက စာရေးသူ ကျွန်တော့် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ၊ အသုံးမကျမှု ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ပါ ခင်ဗျား ။
စာလုံးပေါင်းအမှားအယွင်းများ တွေ့ ခဲ့ရပါကလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျား ။
ကျွန်တော် လှူခဲ့တဲ့ အလှူဒါနအတွက်လည်း ၊ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ ဘာဂ ကို ထပ်တူ ရကြစေဖို့ ၊ “ အမျှ ၊ အမျှ ၊ အမျှ ” သုံးကြိမ် ဝေပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ရှေးအတိတ်ကလည်း ဒီလို ဒါနအလှူတွေပြုခဲ့လို
အခုဘ၀မှာ ရုပ်ချော၊ အရပ်ရှည်၊ သဘောကောင်းခဲ့..
ခုဘ၀ကျတော့လည်း ဒီလိုမတူတဲ့နေရာတွေမှာ ဒါနအလှူတွေပြုမယ်ဆိုတော့
နောင်ဘ၀များတော့… ဒါနအကျိုးတွေ ထပ်ခံစားရဦးမယ်..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုပေရေ.. ဒီည ဘာဘူပွဲ ဘယ်အချိန်လဲဗျာ.. ???
ပွဲချိန်လေးကတော့ ““ ၂ချက် ၁၅ ”” တဲ့
ကရင်စည်သူ ရေ ပို့ စ်တစ်ခု အနေနဲ့ တင်မယ် ကွာ ၊ ဟုတ်ဘီနော် ရဲဘော်
သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုပေရေ …။
လှူရမဲ့နေရာတွေက မြို့တိုင်းမှာ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့မြို့လေးက မူလတန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းသားလေးတွေအတွက် လိုအပ်ချက်လေး တစ်ခုကို သွားလုပ်ပေးနေပါတယ်၊ သုံးသိန်းဘိုးလောက်ကုန်နေပါပြီ။ လုပ်နေရင်း နဲ့ ကျနော်လုပ်ပေးနေတာထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက် တစ်ခု တွေ့ပါတယ်၊ ကျနော့အားနဲ့ မတတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။
တစ်နေ့ သူငယ်တန်း ကျောင်း သားလေးတစ်ယောက် အတန်းထဲမှာ မစင်စွန့်ချပါတယ်၊ သူ့လွယ်အိတ်တွေကော ဘေးနားက ကလေးလွယ်အိတ်တွေကောပေကုန်ပါတယ်။
ဆရာမက နှာခေါင်းပိတ်ထွက်လာပြီး လေးတန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခိုင်ပါတယ်။ ကလေးကိုအိမ်ပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကလေးကဗိုက်ပူနံကားလေးပါ၊ ၀မ်းပျက်နေတဲ့ပုံရပါတယ်။ ကျောင်းကလည်း တော်တော်ဆင်းရဲတဲ့ကျောင်းပါ၊ ကျောင်းဆောင်ထဲမှာ တစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်း ခြားတဲ့ ပါ့တေးရှင်းမရှိပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်လည်းလုံးဝ သန့်ရှင်မှု မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းအိမ်သာကိုကျနော်သွားကြည့်တော့ လေးခန်းတွဲတလုံးက လုံးဝသုံးလို့မရတော့ပါ၊အမိုးမရှိပါ၊တံခါးမရှိပါ။ အုတ်နံရံအကာတွေ ဆွေးမြေ့နေပါပြီ။ ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုကြားမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ခပ်စုပ်စုပ်နှစ်လုံးတွဲ တစ်လုံးရှိပါတယ်၊ တံခါးတွေပျက်နေပါပြီ၊ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ ရှေ့မှာရေအိုင်နဲ့မို့ လျှောက်လမ်းကို သဲအိပ်လေးတွေခင်းထားပေးပါတယ်။ နောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆောက်ပေးထားတဲ့ သုံးခန်းတွဲတစ်လုံးလည်းရှိပါတယ်၊ကောင်းပါတယ်။ ၊ရေထဲမှာပါပဲ ၊လမ်းကိုသဲအိတ်လေးတွေ ခင်းထားပါတယ်၊ကျား/မ၊ခွဲမထားပါဘူး။ ကလေးငယ်လေးတွေ အဲဒီအိမ်သာကိုသွားဖို့ ခက်ပါတယ်။ တစ်ခန်းကဆရာမတွေအတွက် သော့ခတ်ထားပါတယ်။ ကျောင်းသား (၂၆၀) ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အိမ်သာလောက်ပုံမပေါ်ပါ။ အိမ်သာပျက်လေး ပြင်ပေးချင်ပါတယ်၊ အိမ်သာသွားလမ်းလေးခင်းပေးချင်ပါတယ်၊ကြောင်လေး မတတ်နိုင်ပါ။ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးက အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော် အခု တင်တဲ့ လိပ်စာ ကို
စမောကတ် တို့ မြို့ နာမည် ကျောင်းလိပ်စာ ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲ တွေ လိုအပ်ချက်တွေ ကို စာရေးပို့ ပေးပြီး အကူအညီ တောင်းခံ လို့ ရပါတယ် ခင်ဗျာ ။
သာဓု သာဓု ခေါ်မိပါတယ် ကိုမေပေါင်ရေ
အရင်တစ်ခါ ကထိန်ခင်းပြီးကျောက်အောင်တော့ ရန်ကုန်တောင် လာပြီးပြုစုသွားတယ်
အမေဒီကန်သွားပြီး သဂျီးဆီတောင် သွားလည်မလားပဲ
ဖုန်းနံပါတ် တွေ အရင်နှိပ်ရမယ်မောင်
သာဓု သာဓု သာဓု စုစုပေါင်း သာဓု ၆ကြိမ်ခေါ်ဆိုပါ၏..
(ခု၃ကြိမ် ချက်မှာ ၃ကြိမ် ဆိုတော့ ၆ကြိမ်)
စကားမစပ်..အလှူရှင် ဇနီးမောင်နှံ ပုံလေးကော မမြင်ပါလားဗျ
သာဓု ၀င်ခေါ်သွားတယ်ဗျို့ …..ကိုပေရေ
အင်း.. ဂလောက်တောင် ဒါန တွေပြုနေမှတော့ ဒီလိုလူမျိုး လူချစ်လူခင်များတာ ဘာစမ်းသဒုံး..
ဒါနဲ့နောက်တခါ ကျောက်အောင်ရင် ရွာသားတွေကို လှူဗျနော်..
အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေ၇ာတွေကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အခါ ခံစား၇တဲ့ ဝမ်းသာကြည်နူးမှုက ဘာနဲ့ မှ
မလဲနိုင်တာမို့ ကိုပေတို့ ဇနှီးမောင်နှံ တို့ ယခု ထက်ပို ပြီး ဆက်လက်တိုးတက်လှူဒါန်းနိုင်ပါစေလို့ 
ဆန္ဒပြုရင်း …..သာဓု (၃)ကြိမ် ကို ၀မ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်စွာခေါ်သွားပါကြောင်း……..
ကိုတော်ကာတို့ ဇနီးမောင်နှံ ဒီထက်မက အလှူကြီးတွေ ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း………. ကုသိုလ်ဒါနအတွက် သာဓု………. သာဓု………… သာဓု……… ပါ…………
သာဓုပါရှင် … ခုလို မျှဝေတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…….ဒီလိုစိတ်ကလေးရှိတာကိုလည်း လေးစားပါတယ်…
နောက်များလည်း ဒီထက်မက လှူနိုင်တန်းနိုင်ပြီး …. သိန်းသောင်းချီတဲ့ ကျောက်ကောင်းများလည်း ပွင့်နိုင်ပါစေ…… ဘေဘီလေးနဲ့လည်း ဆယ်သက်ဆယ်ကမ္ဘာချစ်နိုင်ပါစေ…
အကြောင်းအရာ စုံစုံလင်လင် နဲ့ ဒါန ပြုနိုင်အောင်/ ဒါနပြုချင်စိတ်ပေါ်အောင် ရေးထားတာ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်မ လဲ အဲဒီလို တောင်တန်းသာသနာပြု ခြင်း အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အရင်က တောင်တန်းသာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမသာရ ရှိဘူးတယ်။ တစ်ပါးတည်း ကြွပြီး သာသနာပြုတာ။
အခုတော့ ပျံလွန်တော်မူသွားပြီ။ သူရေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဘူး၊ သူ့အကြောင်းကိုလဲ ကြားဘူးကြမှာပါ။
ကြုံတုန်း ဝါသနာ အရ လျှာရှည်လိုက်တာပါ။
ကိုကြောင်လေး ရေ “ကို windtalker” ပြောသလို အဲလိုမျိုး နေရာလေးတွေ ရဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရမဲ့ လိပ်စာ လေးတွေ ကြုံရင် ပေးထားပါလား။
ချို့တဲ့ တဲ့ ကျောင်းလေး နဲ့ ခလေးတွေ အကြောင်းကြားတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အဲဒီကျောင်းလေးက သူတို့ချည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ ရဲ့ များပြားလှစွာ သော Poverty Story တွေ ထဲက အကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့။
မင်္ဂလာပါ မခင်လတ် ခင်ဗျာ
ဆရာတော် ဦးတိက္ခ ဟာ သက်တော် ၇၀ ပြည့်ပြီး ပြီ ဖြစ်ပြီး ၊ သက်တော် ၇၅ နှစ်အထိ နယ်စပ် တောင်တန်း နဲ့ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများကို ၊ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် သာသနာပြုဖို့စီစဉ်ထားတယ် လို့ သိရပါတယ် ။ ဆရာတော်ကြီးဟာ သက်တော်၇၀ကျော်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ဆောက်တည်တဲ့ သီလ ၊ ပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းမှု များကြောင့် အရွယ်တင်တာ ကို ဖူးမျှော်ရပါတယ် ခင်ဗျား ။
ဆရာတော်ကြီးဟာ ကချင်ပြည်နယ် က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ ဆီ လည်း သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။